Intengo yomshini wommbila eNigeria naseNingizimu Afrika
Ummbila isivuno esibalulekile sokusanhlamvu okusanhlamvu.Ukusetshenziswa komhlaba wonke kommbila kungaphezulu 116 isigidigidi samathani.E-Africa eseSahara, 50% sabantu esidla ummbila ngenkathi izwe lonke lase-Afrika lilandisa 30% kokusetshenziswa kommbila emhlabeni jikelele.INigeria ingumkhiqizi omkhulu wommbila wase-Afrika, ukukhiqizwa kwakhe sekuphelile 10 izigidi zamathani ommbila, kulandele iNingizimu Afrika. ummbila uhlakazeka ngokwendawo yonke iNigeria futhi ulungele iningi labantu baseNigeria. Cishe 8,0 Amathani ayisigidi wamabele okusanhlamvu akhiqizwa eNingizimu Afrika minyaka yonke cishe 3,1 isigamu samahektha omhlaba uhhafu wokukhiqiza uqukethe ummbila omhlophe wokudonswa kokudla komuntu.
Izinselelo ezibalulekile ezibhekene nokukhiqizwa kommbila e-Afrika ukungasebenzi kahle kwemishini yezolimo nokukhiqiza okuncane, ikakhulukazi umshini wokubhula ummbila. Ngokwemininingwane ye 2014, kukhona okungaphansi 10 ibeka umshini wokubhula ummbila amakhilomitha skwele ngalinye lamapulazi e-Afrika, qhathanisa ne- 257 isetha e-United Kingdom, 200 isetha e-United States, 130 isetha eNdiya, futhi 125 isetha eBrazil. Ngakho-ke, ukuthuthukisa ukungeniswa kokukhiqizwa kommbila wemishini sekuyinto ebalulekile ezweni lase-Afrika ukuthuthukisa ezolimo kanye nokwenza ngcono ukusebenza kahle kwezokukhiqiza kwezolimo.
In 2014, UMongameli waseNigeria uJonathan wayala iCentral Bank yaseNigeria ukuthi isungule a 50 Isigidigidi se-naira sokuthuthukisa imishini yokulima yemishini yezolimo ngokushesha ukusekela ukukhiqizwa kwemishini yezolimo eNigeria. Lokhu kuhamba kuzibophezela ukusheshisa ukuqashelwa kwebhalwe phansi ukuze kusungulwe 1,200 imishini yezolimo eqasha izinkampani ezweni lonke futhi igqugquzela "ukuvuselelwa kwezolimo" eNigeria.
Ngokusho kwezimfuno zemakethe yase-Afrika ,IVICTOR FARM MACHINERY isisungule izinhlobo ezimbili zomshini wommbila wokusiza ukukhiqiza ummbila wezwe lase-Afrika.One umshini wokugaya ummbila ,omunye ngumshini womhlanga kanye nomshini wokuhlangana ohlanganisiwe.
Umshini wokubhula ummbila usetshenziselwa ukwehlukanisa okusanhlamvu namakhekhe. Ngaphambi kokukhishwa, amahlamvu asuswa ngesandla. Ukubhula kommbila kungenzeka kusetshenzwe ngesandla noma kusetshenziswa amandla. Umshini wokugcina umbila uqukethe isilinda , umhlangano we-concave kanye ne-blower unit. Ama-cobs wommbila abiliswa phakathi kwesilinda kanye ne-concave bese izikhwebu zisuswa isenzo se-lugs. I-Blower ihlanze izinto ezilula nezingcezu ezincane zama-cobs nokusanhlamvu okuhlanzekile kuyaqoqwa. The 5-10 i-hp motor kagesi noma uphethiloli ungasebenza umshini. Ingakhipha ukuphuma kwe-1 ~ 2tons. Lolu hlobo lomshini wommbila wensimbi ngosayizi omncane nentengo eshibhile ,kuyathandwa kumlimi wommbila.
Uhlobo lwesibili ngumshini we-multifunction thresher ,kuhlanganiswe ukubhula kommbila wethanga,obe ibhula ummbila kanye neqabunga lommbila. Isetshenziselwa ukukhonkotha nokubhula izinhlamvu zommbila ngasikhathi sinye. Ku-spike yezinhlobo zohlobo lweshelu, izikhonkwane zigxiliwe ekuphakameni okuhlukahlukene kokusebenza kahle kokuhambisa. Ukusebenza kahle kwe-Shelling kumayelana 100% kuzo zombili izehlakalo nezinhlamvu eziphukile zingaphansi 2.0%. umshini we-peeler thresher usindisa umsebenzi omningi ngokuqhathaniswa nohlelo lwendabuko.
Zombili lezi zinhlobo zombili zomshini onentengo eshibhile ye-Afrika emakethe.VICTOR FARM MACHINERY can power power ,umdwebo kanye ne-Logo ngokuya ngesidingo somsebenzisi.